Taura nezve PP yakanyungudika yakaputirwa jira jira
Inonyungudika jira (yakanyungudika yakaputirwa isina-yakarukwa machira) chigadzirwa chakagadzirwa nepamusoro-kusungunuka index PP (polypropylene) rinoumbwa risina-rakarukwa jira. Ndiwo musimboti wezvinhu zvemask. Iyo dhayamita ye spinneret fiber inogona kusvika 0.001 kusvika 0.005 mm. Kune akawanda mavhaid, fluffy chimiro, yakanaka kuunyana kusagadzikana, ...
Nzira yekusarudza kurudyi imwe pelletizing muchina?
Zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoita basa rakakosha munzvimbo dzakasiyana dzekugadzirwa kwemaindasitiri uye zvekurima uye hupenyu nehunhu hwavo hwakajeka senge huremu hwakareruka, simba rakakwira, ngura kuramba, uye kugadziriswa kuri nyore. Nekudaro, nekushandiswa kwakawanda kwezvigadzirwa zvepurasitiki, kuraswa o ...
Sei kusarudza PVC waya mutopota?
1. Icho chiratidzo chepamusoro cheiyo waya yemagetsi chubhu, teerera kuti zita remugadziri, du chigadzirwa modhi, uye maitiro ekumisikidza anoratidzwa pane bai waya chubhu anoenderana, uye zvakare kudzivirira zvigadzirwa zvekunyepedzera dao. 2. Chitarisiko hachina kukuvara, uye hapafanire kuve nekrisimasi, t ...